ကယန်း (ပဒေါင်) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ကယန်း (ပဒေါင်)	Posted by mm thinker on April 19, 2008
Posted in: Anthropology, Experience, Knowledge, Research.	Tagged: Anthropology, Kayan, Padaung, Research.	7 Comments
ကိုမင်းမင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ပဒေါင်းတွေအကြောင်းကို ဘီဘီစီသတင်းတစ်ပုဒ်ကနေ ဘာသာပြန်ထားတာ ဖတ်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က ကျနော် ကယန်း (ပဒေါင်) တွေ အကြောင်း ကျမ်းရေးဖို့ လေ့လာနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့ ဘလော့ဂ်မှာ တစ်ခါမှ မဖော်ပြဖူးပါဘူး။ အရင်ဘလော့ဂ်တုန်းကတော့ Paper and Essay ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တွေတော့ တင်ဖူးပါတယ်။ ကယန်း (ပဒေါင်) အတွက် ဘလော့ဂ် သတ်သတ်လုပ်ချင်လို့ မဖော်ပြဖြစ်တာလည်းပါပြီး၊ ဒီအကြောင်းတွေကို ကျောင်းစာသက်သက် လေ့လာဖို့ အာရုံစူးစိုက်တာမို့ မတင်ဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။
ကိုမင်းမင်းဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ပြီး ဘလော်ဂါအပေါင်းအသင်းတွေဆီက မှတ်ချက်တောင်းရင် ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပဒေါင်များရှိရာသို့ ရောက်ဖူးသူဖြစ်စေ၊ တွေ့ဖူးသူဖြစ်စေ အတွေ့အကြုံ၊ အမြင်လေးတွေ ရေးခဲ့ကြရင် ကျနော့ စာတမ်းမှာ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက အင်တာနက်မှာ ဘလော့ဂ်တွေ အပေါ်လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်မြေကထွက်ခွာပြီး သူတပါးမြေမှာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတဲ့ တိုင်းရင်းသားပဒေါင်တွေအကြောင်း Awareness ရှိသူ မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေမှာတော့ အများကြီး ပြောဆို ဆွေးနွေး၊ ကန့်ကွက်ကြတာကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ တွေ့ရတာပါပဲ။ ပဒေါင်တွေ အကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၅ တုန်းက တက္ကသိုလ်ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သျှင်ထွေးယဉ်ရဲ့ “ကယန်း (ပဒေါင်)”ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် စာပေဗိမာန်ကနေ ထွက်ဖူးပါတယ်။ ကယန်းစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့ ပါစကယ် ခူးသွေးရဲ့ From the Land of Green Ghosts: Burmese Odyssey ဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၂ မှာ အင်္ဂလန်ကနေ ထုတ်ဝေပါတယ်။ စာအုပ်အဖြစ်ထွက်မလာတာကတော့ The Narratives, Beliefs and Customs of the Kayan People ဖြစ်ပါတယ်။
www.khitpyaing.org/news/march_2007/newstitle_march2007.php ပဒေါင်တိုင်းရင်းသားများ တတိယနိုင်ငံတွင် အခြေချရေး ထိုင်းအာဏာပိုင်များငြင်းဆို/ဧရာဝတီ-ဧပြီ ၁၁၊ ၂၀၀၇
http://irrawaddy.org/bur/news2007/April/apr_11_07.html နယ်မြေမအေးချမ်းသရွေ့ ဌာနေပြန်မည်မဟုတ်ဟု ပဒေါင်ရွာလူကြီးပြောဆို/ခေတ်ပြိုင်-ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၀၇
http://www.khitpyaing.org/news/july_2007/5-7-07a.php လည်ပင်းရှည်ပဒေါင် (၆) ဦး တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ/ခေတ်ပြိုင်-နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇
http://www.khitpyaing.org/news/november_2007/22-11-07_c.php ရိက္ခာပုံမှန်မရ၍ ကြေးကွင်းပတ်ကယန်းမိသားစုများ အခက်ကြုံနေရ/သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက်-ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၀၈
http://www.nmg-news.com/nmg/news080108.html ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ပဒေါင်ရွာနှင့်…/Weekly Eleven News-ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၀၈
http://www.khitpyaing.org/news/february_2007/9-2-07a.php ပဒေါင်လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း/အီဒစ် မီရန်တေး
http://irrawaddy.org/bur/bshelf/2007/bshelf_29_2007.html ကယန်း (ပဒေါင်)/သျှင်ထွေးယဉ်
http://targay.blogspot.com/ ကယား၊ ကယန်း၊ ကရင်နီ/SoWhat-ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၇
http://s0wha1.blogspot.com/2007/06/blog-post_24.html ဖတ်ပေးစေချင်လို့/ခင်မင်းဇော်-ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၀၇
http://khinminzaw.blogspot.com/2007/06/select_27.html ပဒေါင်ဆိုတာ ငှက်လား/မယ်လိုဒီမောင်-သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၀၇
http://melodymaungmm.myanmarbloggers.org/2007/08/blog-post_03.html ကယားပြည်နယ်/လွိုင်ကော်မြို့-ကန္ဒာရ၀တီ-သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၀၇
http://loikawland.blogspot.com/2007/08/blog-post_4790.html ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လူတိရိစ္ဆာန်ရုံမှ မြန်မာ မိန်းမသားများ/မင်းမင်း-ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊၂၀၀၈
http://hteinkmin.myanmarbloggers.org/2008/01/blog-post_31.html Karen Long Neck/Oriental Portal by Mr. Glenn Casaer
← ဖွဲ့တည်ရာနှင့် သောင်းပြောင်းထွေလာ	၀ါးတားတားများ →	7 comments on “ကယန်း (ပဒေါင်)”
ဟန်သစ်ငြိမ် on April 19, 2008 at 7:31 am said:
Reply	ခင်မင်းဇော် on April 19, 2008 at 8:35 am said:
Reply	Pinkgold on April 20, 2008 at 3:02 am said:
Reply	မင်းကျန်စစ် on April 23, 2008 at 5:56 pm said:
Reply	စိုးထက် - Soe Htet ! on April 24, 2008 at 7:51 am said:
ကောင်းလိုက်တာ ဗျာ .. ဆက် လုပ်ဗျ .. တစ်ကယ့် တိုင်းရင်းသား အမွေ အနှစ် တွေ … ခရီးသွားလုပ်ငန်း အပြင် လူမှု စီးပွားဆိုင်ရာ သုံးသပ် ချက် လေးတွေ ပါ ထည့်ပါလား ဗျ😛
Reply	Pingback: Karenni and Its Sub-Tribe « M M Ŧ ђ ĩ ŋ ķ є я
မင်းသွေး on June 14, 2010 at 10:50 am said: